ဂျူနီယာဝင်း – အသက်နဲ့ လူတွေ | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်လူပေ ● ကျွန်တော့်ဆရာ ကလေးတွေအကြောင်း
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● တပ်ချုပ် ဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ခ်ျ အမုန်းစကားမပြောဟု တပ်အရာရှိတစ်ဦး ဆို
မေ ၄၊ ၂၀၁၄
‘အသက်နဲ့လူတွေ’ ပါ။ ‘အသက်မဲ့လူတွေ’ မဟုတ်ပါ။ သူတို့မှာ ကျွန်မတို့လိုပဲ အသက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ဆိုတာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးဒဏ်ကြောင့် အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ရစရာမရှိအောင် ပျက်စီးသွားခဲ့ရသူတွေပါ။ အသက်တွေရှိသလို ခံစားတတ်တဲ့ နှလုံးသားတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ခံစားတတ်တယ်။ ငိုကြွေးတတ်တယ်။ ပျော်ရွှင်တတ်တယ်။ ဆာလောင်တတ်တယ်။ သနားတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ကျေးဇူးတင်တတ်ကြပါ တယ်။
အသက်ရှိတယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့အတွက် ခံစားမှုတွေ ပါသွားပါတယ်။ လူတွေလို့ဆိုလိုက်တော့ စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဦးနှောက်တွေ နဲ့အတူ တွေးခေါ်တဲ့ အသိဉာဏ်တွေပါသွားတယ်။ သူတို့ဟာ လေးဘက်လေးတန်ကာရံထားတဲ့ အိမ်ကလေးတွေမှာ မိသားစုနဲ့အတူတကွ နေကြ တယ်။ ကျွန်မတို့တွေလိုပဲ နေ့စဉ်ကိစ္စတွေ၊ အလုပ်တွေနဲ့ ရှုပ်နေကြပါတယ်။ မိသားစုပျော်ရွှင်စရာတွေလည်း ရှိတယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေ လည်းရှိတယ်။ ပြီးတော့… ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး နေကြသူတွေပါ။
ရုတ်တရက် အဖြစ်ဆိုးကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဖက်တွယ်ပြီးနေနေတဲ့ အိမ်ကလေးလည်း ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ နေ့စဉ် တွေ့ နေကျ မိသားစုတွေလည်း ဖရိုဖရဲ တကွဲတပြားဖြစ်သွားရုံမက ကိုယ့်အသက်တွေကိုတောင် ဖက်နဲ့ထုပ်ပြီး ပြေးလွှားရှင်သန်လာခဲ့ကြရသူ တွေပါ။ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ငွေကြေး၊ အိုးခွက်ပန်းကန် ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့တဲ့ ဟောဒီမုန်တိုင်းကြီးကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရှင်သန်ခဲ့ကြရတဲ့ အသက်နဲ့လူတွေပါ။ ကိုယ့်ဘိုးဘွား၊ ကိုယ့်မိဘ၊ ကိုယ့်သားသမီး၊ ကိုယ့်မြေးကလေးတွေ ရှာဖွေဖက်တွယ်ဖို့ နှလုံးသားနဲ့လူတွေမှာ ကိုယ့် အသက်လေးဆက်ရှင်ဖို့အရေး သူတကာကို လက်ဖြန့်တောင်းနေရတဲ့အဖြစ်ကို လက်မခံချင်ဘဲ လက်ခံလိုက်ရပြီ။ ရုတ်တရက်ကြီး ဆိုသလိုအသိကင်းမဲ့၊ အရှက်ကင်းမဲ့… အဲသည်လိုအဖြစ်မျိုးကို ကိုယ်သာကြုံလိုက်ရရင် ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲ။ ကြိုတင်ပြီး ငွေကြေးဥစ္စာ တွေကို လုံခြုံတဲ့နေရာ ပို့ထားချိန်မရှိ။ ကိုယ့်အဘိုးအဘွားတွေကို ဘေးလွတ်ရာရှောင်ဖို့ အချိန်မရှိ၊ နို့စို့ရွယ်ကလေးငယ်တွေ၊ ကိုယ် ဝန်သည်တွေ၊ မပြေးနိုင် မလွှားနိုင်သူတွေအတွက် စဉ်းစားပေးချိန်မရှိလိုက်တဲ့ အဖြစ်။ ပြီးတော့ သူတို့အားလုံးဟာ အသက်နဲ့လူတွေပါ။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲတတ်ပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်း ခံစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟောဒီဒဏ်ကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လောက်အထိ ကြံ့ကြံ့ခံပေးကြမှာလဲ။ သူတို့ရဲ့ အခုလောက်ထိခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရ တဲ့ မျက်လုံးတွေ၊ သူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေ၊ သူတို့ရဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကို ပြန်ပြောဖို့ အင်အားရှိနေဆဲသူတို့ရဲ့ စကားလုံးတွေ အဲသည်အ သက်နဲ့လူတွေ။
မိသားစုဝင်တွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ပျောက်ဆုံးသေဆုံးဆုံးရှုံးမှုကို လက်ခံလိုက်ကြရပြီ။ အဲသည်အဘိုး၊ အဲသည်အဘွား၊ အဲသည် မိဘ၊ အဲသည် အစ်ကို၊ မောင်၊ ညီလေး၊ ညီမလေး၊ သား၊ သမီး၊ အဲသည် မြေးကလေးတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့ရတော့ဘူး။ အဲသည်လို မှတ်လိုက်ရပြီ။ အဲသည်လို ယူဆကြပေတော့။ နောက် လိုက်ရှာမနေနဲ့တော့။ ဟောသည်မှာတင် သည်ဘဝသည်မျှသာ ဘယ်လိုလဲ…၊ သတ္တဝါတစ်ခုကံတစ်ခုဆိုတာကို ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီး ဘယ်လိုစိတ်ဖြေကြမလဲ။ သူတို့မပါဘဲ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်တည်ဆောက် ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်ဆက်လျှောက်ကြရတော့မယ်။ အသက်နဲ့လူတွေလေ အသက်မဲ့လူတွေမှ မဟုတ်တာ။ ခံစားတတ်တယ်။ မျက်ရည်ကျတတ်တယ်။ သတိရတတ်တယ်။ ဝမ်းနည်းတတ်တယ်။ သေသောသူ ကြာရင်မေ့ ပျောက်သောသူရှာရင်တွေ့ဆိုတာ မယုံဘူး။ နှလုံးသားတစ်ခုလုံးဆွဲညစ် ဆုတ်နယ် လွှင့်ပစ်ခံလိုက်ရတာ။ အလောင်းတောင် ရှာမရဘဲ သေပြီလို့ သတ်မှတ်လိုက်ရတာ။ ခံစားတတ်ကြပါတယ်။ စက်ရုပ်မှ မဟုတ် တာပဲ။ အသက်နဲ့လူတွေပါ။
ဒီအရင်က အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးလာပါ။ ဒီနေ့ အိမ်ထောင်ဦးစီး အစည်းအဝေးရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေ… တဲ့။ အဲသည်လိုဆိုရင် ကိုယ့်အဘိုးကိုယ့်အဖေ သွားကြရတယ်။ မိသားစုထဲမှာအသက် အကြီးဆုံးကိုခေါ်တာပေါ့။ အခုတော့ အဲသည်လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ အခုနှစ်မှ ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ကလေးပါ။ အခုမှ ဆယ်တန်းရောက် တာပါ။ ကျောင်းမနေဖူးပေမဲ့ ၂ဝ နှစ်တော့ ရှိပြီ။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတွေခေါ်နေတယ်ဆိုရင် အဲဒီအရွယ်ကလေးတွေ အပြေးအလွှားသွား တန်းစီရတယ်။ ထိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ထိုင်ကြရတယ်။ လှူတဲ့ပစ္စည်းတွေ လက်ခံရတယ်။ မိဘကိုယ်စား ဘိုးဘွားကိုယ်စားတဲ့။ အိမ်ထောင် ဦးစီးဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို အရင်ကကိုယ်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ ထင်ခဲ့တာလေ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးကြောင့် ဘိုးဘွားမိဘတွေမှ မရှိတော့တာ။ ကိုယ်မှ မသွားရင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ညီလေး၊ ညီမလေး ဘယ်လိုစခန်းဆက်သွားမှာတုန်း။ နာကြင်နေတဲ့ နှလုံးသားနဲ့ လူကြီးလုပ်နေကြရပြီ။ အသက်နဲ့လူတွေကိုး။ ဘယ်ကရောက်လာမှန်းမသိတဲ့ သတ္တိတွေ၊ ဘယ်သူကပေးလိုက်မှန်းမသိတဲ့ အင်အားတွေနဲ့ ဘဝဆိုတာအဲဒါပဲ။ ခါးသီးတယ်၊ အကြင်နာကင်းမဲ့တယ်။ မျက်နှာလိုက်တယ်။ ကံဆိုးမသွားရာမိုးလိုက်လို့ရွာတို့၊ အကုသိုလ်များဝင်ရင် အတုံးလိုက် အတစ် လိုက် ဝင်တယ်တို့ ရှိသမျှသောစကားပုံတွေ အကုန်မှန်တော့တာပဲ။ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာမတ်မတ်ရပ်၊ ခံစားချက်တွေကို မြိုသိပ်၊ ကျန်ရှိနေ သေးတဲ့ ကိုယ့်သွေးသားတွေရဲ့ လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထား။ ကံကြမ္မာကို ရင်ကော့ပြီးခံတယ်။
မိသားစုနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှတို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကို မြိုချထားလိုက်။ သူတို့မိသားစုဝင် ဆုံးရှုံးတာတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်။ အဲဒါ ထပ်တူထပ်မျှဆိုလိုက်ရင် မပြည့်စုံသေးဘူး။ ဒီထက်မကအဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ စကားလုံးတွေ ရှိဦးမယ်။ ဒီထက်ပြင်းထန်တဲ့ ကြေကွဲစရာစကားလုံးတွေ ရှိဦးမယ်။ နှုတ်ကနေတောင် ရေတွက်ဖို့ ဘာမှထွက်မလာဘူး။ စကားလုံးရှာမရဆိုတာ အခုမှပဲသိတော့တယ်။ မေးလည်း မမေးရက်။ ကြားလည်း မကြားရဲ။ စဉ်းစားမိရုံလေးနဲ့တင် ကြက်သီးထမတက် ခံစားရတယ်။ သူတို့ကျတဲ့ မျက်ရည်တွေ မကြည့်ရက်ဘူး။ အချိန်ဆိုတဲ့သမားတော်က ဘယ်မှာတုန်း။ ရင်ထဲကဒဏ်ရာတွေကိုကုစားဖို့ စောလွန်းပါသေးသတဲ့။ ဒီတော့ ရင်ထဲကဒဏ်ရာကို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ကုစားပေတော့။ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ လပိုင်းအတွင်းမှာ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ရပ်တည်ရေး၊ စားရေး သောက်ရေး၊ နေရေးထိုင်ရေးဆိုတဲ့ တာဝန်တွေ၊ ဝတ္တရားတွေနဲ့ ခေါင်းတောင်မဖော်နိုင်တာ။ အချိန်ဆိုတဲ့အရာကို ဟားတိုက်လို့တောင် ရယ်လိုက်ချင်ပါရဲ့။ ဟောဒီလပိုင်းနဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရှင်သန်၊ ဘယ်မှာလဲလွမ်းစရာအချိန်၊ မျက်ရည်ကျစရာအချိန်။ ဒီတော့ အချိန်ဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဆိုလိုတာကသူတို့ရင်ထဲကဒဏ်ရာတွေ ကုစားဖို့အချိန် မရှိတော့ဘူး။ သူ့စားဝတ်နေရေးအတွက် တာဝန်ဝတ္တရားအတွက် ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေ ကုန်ပြီ။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွင်းမီးဖွားလိုက်တဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ၊ မုန်တိုင်းကြီးထဲပြေးရလွှားရတဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ မုန်တိုင်းအပြီးမှာ မွေးကင်း စကလေးအတွက်၊ ဗိုက်ထဲကမွေးကာနီးကလေးအတွက် သူတို့ဘာတွေ စဉ်းစားနေမှာလဲ။ ဒါတောင် ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အတွက် မပါသေးဘူး။ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ စိတ်မထိခိုက်ရတို့၊ နာရေးကိစ္စတောင် ကိုယ်ဝန်နဲ့ မွေးတဲ့သူတွေကလေးထိခိုက်မှာစိုးလို့ လျှို့ ဝှက်ထားရမယ်တို့ စတဲ့အယူအဆတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ။ သူတို့များဘယ်လိုအင်အားတွေ၊ သတ္တိတွေနဲ့ ရပ်တည်နေကြမှာပါလိမ့်။ အသက်နဲ့ လူတွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သာမန်ထက် သတ္တိရှိလိုက်ကြတာ။ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေဟာအမှောင်ထဲကအလင်းရောင်လား။ ဘုရားကပေးတဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ပါးများ ဖြစ်နေမလား။
မုန်တိုင်းအတွင်းမှာမွေးကင်းစကလေးတွေကိုမိဘတွေ၊ အစ်ကိုတွေ၊ အစ်မတွေကအတင်းဖက်ပြီးပြေးလွှားခိုင်းခဲ့လို့ လွတ်ကြတယ်။ ဆယ် ကျော်သက်ကလေးတွေ ကိုယ့်ဘာသာအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုပ်နိုင်တဲ့ အရွယ်တွေဖြစ်လို့ လွတ်ခဲ့နိုင်ကြတယ်။ အဲဒီအသက်အရွယ်ကြား ကဟိုမရောက် ဒီမရောက်အရွယ်ကလေးတွေမှာတော့ များစွာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတယ်။ တကွဲတပြား ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ကျန်ခဲ့တဲ့ မွေး ကင်းစလေးတွေ၊ ကလေးပုစိကွေးလေးတွေမှာသူတို့ကိုထွေးပွေ့ထားတဲ့ ဆွေမျိုးတွေ၊ မိဘတွေ (ရှိသေးရင်တော့)၊ အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ လက်ထဲမှာကစားစရာရုပ်ကလေးတွေပိုက်လို့ ပျော်နေကြတယ်။ အဖေ၊ အမေ၊ ဘယ်မှာလဲလို့ မမေးတတ်ပါဘူး။ တစိမ်းတွေလက်ထဲရောက်လည်းနားမလည်ရှာဘူး။ ကစားစရာ၊ စားစရာ၊ ဆော့စရာတွေရှိနေရင် ပြည့်စုံနေကြပြီ။ နောင်သိတတ်လာတဲ့ တစ်နေ့မှာ သူ့ကိုတစ်ယောက် ယောက်က ပြောပြမှသိမယ်။ ပါးစပ်ရာဇဝင်ဆိုတာကို လက်ဆင့်ကမ်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ သူတို့လေးတွေ သိသွားကြလိမ့်မယ်။ အဲ သည်လိုပဲလက်ခံထားပေတော့။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွင်းသေဆုံးသွားသူတွေအတွက် ဆွမ်းဦးဆိုတာဘယ်နေမှန်းတောင် မသိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ပါ။ သပိတ်သွတ်တာတို့၊ သက်ပျောက်ဆွမ်းတို့စဉ်းတောင် မစဉ်းစားရဲခဲ့ဘူး။ တမလွန်ကဘိုးဘွား၊ မိဘ၊ သားသမီးမြေးတွေတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေ တာဝန်မကျေခဲ့ရတာနားလည်ပေးကြပါတော့လို့ပဲ တောင်းပန်ကြရတော့မယ်။ တစ်လပြည့် (နှစ်လ) ပြည့်တွေကိုတော့ အလှူရှင်တွေရဲ့ အလှူငွေလေးတွေနဲ့ အမျှတန်းဝေနိုင်ခဲ့ကြပြီပေါ့။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြီးမတိုင်မီကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားသူတွေအတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။ သူတို့က ဒီလိုဆိုး ရွား၊ ရက်စက်တဲ့ ကြောက်စရာအဖြစ်တွေကို မြင်မသွားကြဘူး။ ကြုံမသွားကြရဘူး။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မသွားကြရဘူး။ ရူးသွပ်မသွားကြဘူး။ နာဂစ်မုန်တိုင်းအတွင်း လေဒဏ်၊ ရေဒဏ်ကြားအသက်ပျောက်ခဲ့ကြသူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းကြေကွဲမိတဲ့ကြားက ကျန်ရစ်ခဲ့သူတွေရဲ့ ပူပင်သောက၊ လွမ်းဆွေးအပူမီးတွေ မခံရလေခြင်းလို့ ကြံဖန်တွေးပြီး ဖြေလိုက်မိပါရဲ့။ မွေးကတည်းကလယ်လုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ တံငါလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးလာခဲ့ကြသူတွေလေ။ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံတွေအများကြီး မကိုင်ဖူးကြပါဘူး တဲ့။ အဝတ်တစ်စုံလောက်နဲ့နေလို့ ဖြစ်ပါသတဲ့။ အဲဒီလို မုန်တိုင်းအတွင်း ကွယ်လွန်သွားသူတွေကိုတော့ သတိရနေကြတယ်။ အရင်က နေခဲ့ရတဲ့ မိသားစုဘဝကိုတော့ ဘယ်လိုအရာမျိုးနဲ့မှ မလဲနိုင်၊ တန်ဖိုးထားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းပါ။
(အမှတ် ၁၉၉၊ ၂ဝဝ၈၊ အောက်တိုဘာလ)
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Junior WIn, ရသဆောင်းပါးစုံ
One Response to ဂျူနီယာဝင်း – အသက်နဲ့ လူတွေ
catwoman on May 6, 2014 at 8:26 am
it s very true. i cannot believe the gov did very little to help. Our people re very resilient and strong but sometimes we have no choice. I hope the readers will get to read this post -i believe we should be allowed to express our opinions since we live in the US.